2001 – Year – Alpha Premium
Hi! Dharma! (2001) ##unicode ဒီတစ်ခါမှာတော့ "Hi! Dharma"ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျယ်ဂူနဲ့ သူ့ရဲ့လူတွေဟာ ဂန်းစတားတွေဖြစ်ပြီး ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ရဲတွေလက်ထဲမဖမ်းမိစေရန် ရှောင်ရှားနေဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက် သူတို့အဖွဲ့ဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာပုန်းရှောင်နေဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ သူတို့ပုန်းရှောင်မဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကတော့ ဆရာတော်တွေဟာ စည်းစနစ်ကျကျ အေးချမ်းချမ်းနဲ့သီတင်းသုံးနေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာ ဂျယ်ဂူတို့အဖွဲ့ကို တစ်ပတ်နေခွင့်ပေးပြီးနောက်မှာ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နေရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ အခွင့်အရေးမပေးသေးတဲ့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်တွေဟာ သူတို့အဖွဲ့ကိုဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်မပေးလိုတော့တဲ့အခါမှာ ဆရာတော်တွေနဲ့ သူတို့အဖွဲ့ကြားမှာ ယှဉ်ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့... ဘယ်အဖွဲ့ကများ အနိုင်ရရှိသွားမလဲ၊ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဂျယ်ဂူဟာလည်း သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်ကိုသိရှိသွားပြီးနောက်မှာ အဖွဲ့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုတွေများ ဆောင်ရွက်သွားမလဲ၊ ဆရာတော်တွေနဲ့ရော သင့်မြတ်သွားကြမလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါ။ ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ action comedy ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရှု့ပြီးစိတ်အပန်းဖြေလိုက်ကြရအောင်ပါ။ ##zawgyi ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ "Hi! Dharma"ဆိုတဲ့ ကိုရီးယားကားေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဂ်ယ္ဂူနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လူေတြဟာ ဂန္းစတားေတြျဖစ္ၿပီး ကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ ရဲေတြလက္ထဲမဖမ္းမိေစရန္ ေရွာင္ရွားေနဖို႔ျဖစ္လာပါတယ္။အဲ့ဒီလိုျဖစ္ၿပီးေနာက္ သူတို႔အဖြဲ႕ဟာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုမွာပုန္းေရွာင္ေနဖို႔ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ သူတို႔ပုန္းေရွာင္မဲ့ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာကေတာ့ ဆရာေတာ္ေတြဟာ စည္းစနစ္က်က် ေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔သီတင္းသုံးေနခဲ့ပါတယ္။ေက်ာင္းမွာ ဂ်ယ္ဂူတို႔အဖြဲ႕ကို တစ္ပတ္ေနခြင့္ေပးၿပီးေနာက္မွာ သူတို႔ဟာသူတို႔ရဲ႕ေနရာကိုျပန္လည္ေရာက္ရွိဖို႔ အခြင့္အေရးမေပးေသးတဲ့အတြက္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာပဲ ဆက္လက္ေနထိုင္ဖို႔ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆရာေတာ္ေတြဟာ သူတို႔အဖြဲ႕ကိုဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္မေပးလိုေတာ့တဲ့အခါမွာ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ သူတို႔အဖြဲ႕ၾကားမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲေတြက်င္းပဖို႔ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့... ဘယ္အဖြဲ႕ကမ်ား အႏိုင္ရရွိသြားမလဲ၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဂ်ယ္ဂူဟာလည္း သစၥာေဖာက္တစ္ေယာက္ကိုသိရွိသြားၿပီးေနာက္မွာ အဖြဲ႕အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ဘယ္လိုေတြမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမလဲ၊ ဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ေရာ သင့္ျမတ္သြားၾကမလားဆိုတာကိုေတာ့ ဇာတ္လမ္းထဲမွာ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈလိုက္ၾကပါ။ ဒီလိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ action comedy ဇာတ္ကားေလးကိုၾကည့္ရႈ႕ၿပီးစိတ္အပန္းေျဖလိုက္ၾကရေအာင္ပါ။ Review – KKK File Size ...
Spy Game (2001) ##unicode Spy Gameဇာတ်ကားမှာတော့ မင်းသားကြီး Robert Redfordနဲ့ Brad Pittတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အမေရိကနဲ့တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုလုပ်နေချိန်မှာ တရုတ်ဘက်က SuChouအကျဉ်းထောင်ကို ကျူးကျော်လာတဲ့အမေရိကန်သူလျိုတစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိသွားကာ ၂၄နာရီအတွင်းကွပ်မျက်ဖို့ကြေညာခဲ့တယ်။ CIA ကအေးဂျင့်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Nathanက အရင်ကသူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ဖူးသူ စပိုင်အေးဂျင့် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Tom Bishopဟာ တရုတ်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရကြောင်းသိလိုက်ခဲ့ပြီးပြန်ကယ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။ အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေက Tom Bishopကိုကယ်ဆယ်မှုက တရုတ်အမေရိက ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကို ပြသာနာဖြစ်စေမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက် ကယ်ဆယ်ရေးကိုပယ်ဖျက်လိုက်ခဲ့တယ်။CIAဘက်က ကယ်ဆယ်ရေးကိုမလုပ်မှန်း သိနေတဲ့ Nathanတစ်ယောက်ကတော့ Tom Bishopကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘာသာတစ်ယောက်တည်း ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ရုံးမှာဘဲ သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေသူတွေများပြားတာကြောင့် လှည့်ကွက်မျိုးစုံကို ဖန်တီးကာ TomBisopကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းရှာရပါတော့တယ်။ Nathan တစ်ယောက် CIAရဲ့စောင့်ကြည့်မှုကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပြီး TomBishopကိုကယ်တင်နိုင်ပါ့မလားလို့ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။ ##zawgyi Spy Gameဇာတ္ကားမွာေတာ့ မင္းသားႀကီး Robert Redfordနဲ႔ Brad Pittတို႔က ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ အေမရိကနဲ႔တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးညႇိႏႈိင္းမႈလုပ္ေနခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ဘက္က SuChouအက်ဥ္းေထာင္ကို က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့အေမရိကန္သူလ်ိဳတစ္ေယာက္ကို ဖမ္းမိသြားကာ ၂၄နာရီအတြင္းကြပ္မ်က္ဖို႔ေၾကညာခဲ့တယ္။ CIA ကေအးဂ်င့္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့Nathanက အရင္ကသူနဲ႔အလုပ္တြဲလုပ္ဖူးသူ စပိုင္ေအးဂ်င့္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Tom Bishopဟာ တ႐ုတ္မွာအဖမ္းခံလိုက္ရေၾကာင္းသိလိုက္ခဲ့ျပီးျပန္ကယ္ဖို႔လုပ္ပါေတာ့တယ္။ အေမရိကန္အာဏာပိုင္ေတြက Tom Bishopကိုကယ္ဆယ္မႈက တ႐ုတ္အေမရိက ကုန္သြယ္ေရးညႇိႏႈိင္းမႈကို ျပသာနာျဖစ္ေစမွာကိုစိုးရိမ္တဲ့အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးကိုပယ္ဖ်က္လိုက္ခဲ့တယ္။CIAဘက္က ကယ္ဆယ္ေရးကိုမလုပ္မွန္း ...
IMDB: 7.1/10 144,110 votes
Tomie Collection တိုမီအဲဆိုတဲ့ ဂန္တဝင်သရဲမရဲ့ ပထမဦးဆုံးထွက်တဲ့ကားလေးပါ တိုမီအဲအကြောင်းပြောပြရရင်တော့ သူဟာ မယ့်ဂျီအရေခင်းကာလ (Jan 25, 1868 – Jul 30, 1912) ကနေ ခုချိန်ထိ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ မှုခင်းအချို့မှာ သူ့နာမည်အမြဲပါနေတာကို တွေ့ရတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ သူဟာအကြိမ်ကြိမ် အသတ်ခံရကာ ခေါင်းပြတ်ကြီးကနေ ပကတိလူအဖြစ်ကြီးထွားလာ သူ့ကိုလူတွေမြင်တာနဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ် သူ့ကိုစွဲလန်းပြီးသူ့ကိုပတ်သတ်မိတဲ့လူတွေဟာ သေသူသေ ရူးသူရူး ပျောက်သူပျောက်နဲ့ တကွဲတပြားစီဖြစ်ကုန်တာကတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ် အခုလည်းသူဟာ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းသူအဖြစ်တက်ပြီး ကျောင်းကကျောင်းသူ စုကီကို ရဲ့ ရည်းစားကို စနိုက်ကြော်လို့ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံရပြီး ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုလွှင့်ပစ်ခံရတာပါ စုကီကိုဟာ ထိတ်လန့်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုလုံးဝမမှတ်မိတော့ဘဲ အိပ်မပျော်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရလို့ ဆေးခန်းပြနေရသူပါ တဖြည်းဖြည်းလူတစ်ယောက်လို ပြန်ပြည့်ဖြိုးလာတဲ့ တိုမီအဲဟာ စုကီကို ရှိရာကို တစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားလေးကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် သူ့ရဲ့ရှေ့နောက်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိချင်တဲ့လူတွေအတွက် အောက်မှာဇာတ်ကားစာရင်းလေးပေးထားပါတယ် အကုန်လုံးလည်းတကားချင်းစီတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် 1. Tomie (1999)(ယခုကား) 2. Tomie: Another Face (1999) 3. Tomie: Replay (2000) (တင်ဆက်ပြီး) 4. Tomie: Re-birth (2001) 5. Tomie: The Final Chapter – ...
Kabhi Khushi Kabhie Gham နင်းကန်လန်းလို့ ပြသချိန် ၃နာရီကျော်ကြာတာတောင်ခဏလေးလို့ ထင်ရတဲ့ကားကြီးမို့ တင်ဆက်ပေးထားပါသည်…. Bollywood ရဲ့နာမည်ကြီး Drama ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ IMDb rating 7.4 အထိတောင် ရထားပါတယ်။ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တော်တော်များများ ပါပါတယ်။ ယာရှ်နဲ့ နန်ဒနီတို့ဟာ သားသမီးမဖွားမြင်တာကြောင့် ရာဟုလ်ကိုမွေးစားဖို့အိမ်ခေါ်လာပါတယ် သားအရင်းမဟုတ်ပေမယ့်သားအရင်းတစ်ယောက်လို ချစ်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့ ရာဟုလ်က အဖြစ်မှန်ကို သိသွားခဲ့ပေမယ့် အဲဒီစကားကို အဲဒီအိမ်မှာ ဘယ်တော့မှ ထပ်မပြောကြဖို့ ယာရှ်က ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ယာရှ်ဟာ မျိုးရိုးဂုဏ်အရှိန်အဝါနဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဥ်အလာတွေကို အလေးထားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် ရာဟုလ်ကို အဆင့်အတန်းတူတဲ့ မျိုးရိုးက ဆင်းသက်လာသူနဲ့သာ ပေးစားချင်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးဇာတ်နိမ့်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရာဟုလ်က ချစ်မိသွားပြီး ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲ ကြည့်ရှုပေးကြပါ။
IMDB: 7.4/10 43,325 votes
Cats & Dogs (2001) ဒီကားေလးကေတာ့ၿဖင့္အထူးတလည္ေၿပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး…ကြ်န္ေတာ္တို႕ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ထဲကၾကိဳက္ႏွစ္သက္လာတဲ့ ခ်စ္စရာေခြးေလးေတြေၾကာင္ေလးေတြပါတဲ့ကားေလးတစ္ကားပဲၿဖစ္ပါတယ္… ကားေဟာင္းေလးေပမယ့္ ၿပန္ၿပီးသိမ္းထားသင့္တဲ့ ငယ္စဥ္ဘ၀အမွတ္တရကားေကာင္းေလးတစ္ကားၿဖစ္ပါတယ္… ဒီကားေလးဟာ ကေလးေလးေတြၾကားထဲမွာေရပန္းစားပံုတင္မက လူၾကီးမ်ားပါႏွစ္ၿခိဳက္အားေပးခဲ့ၾကတဲ့ ရယ္စရာကားေလးတစ္ကားပဲၿဖစ္ပါတယ္…. ဇာတ္လမ္းရဲ႕ အစမွာေတာ့ ေခြးေတြကိုအၿမဲအႏိုင္လိုခ်င္စိတ္ေတြရွိေနတဲ့ မစၥတာတင္ကယ္ဆိုတဲ့ ေၾကာင္မိစၦာေလး…. သူတို႕ရဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ ေအးဂ်င့္အသစ္ေနရာမွာအစားထိုးခံလိုက္ရတဲ့ ေခြးကေလး လိုယူတို႕.. ဘယ္လို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ႕ေတြနဲ႕ခ်ၾကမလဲဆိုတာ ၾကည့္ရမွာပဲၿဖစ္ပါတယ္…. ဒီကားေလးကိုငယ္ငယ္ကဘာသာၿပန္မ်ားနဲ႕ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ရေပမယ့္ စိတ္တိုင္းမက်ခဲ့လို အခုေတာ့ အေကာင္းဆံုးမြန္းမံဘာသာၿပန္မႈ႕မ်ားနဲ႕ ၿပန္ၿပီးတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္ဗ်… ဒီကားေလးရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကေတာ့ လူေတြရဲ႕ညစ္ေနတဲ့စိတ္ေတြကို ေၾကာင္ေလးေတြေခြးေလးေတြရဲ႕ခ်စ္စရာစကားေၿပာအသံေလးမ်ားနဲ႕ ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ေပးထားတယ္ဆိုတာ ၾကည့္ရႈ႕မယ့္သူမ်ားအားလံုးသိၾကရမွာၿဖစ္ပါတယ္….
IMDB: 5.1/10 55,614 votes
Princess of Thieves Princess of Thieves (2001) =================== IMDb Rating – 5.7/10 #Unicode ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပုံပြင်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒါရိုက်တာ Peter Hewitt ရိုက်ကူးထားတဲ့ Princess of Thieves နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒီဇာတ်ကားက ရော်ဘင်ဟုထ် နဲ့ သူ့သမီး ဇာတ်ကြောင်းလေးကို ရိုက်ထားတာပါ။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဘုရင်သေဆုံးသွားတော့ မြို့စားမင်းရဲ့ အာဏာတပ်မက်မှု့တွေကြောင့် နောက်နန်းတက်မဲ့ ဘုရင့်သားတော် တစ်ပါးကို ကြေးစားငှါးရမ်းပြီး လိုက်လံ သတ်ဖြတ်ခိုင်းပါတော့တယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ ဘုရင့် အပေါ် သစ္စာစောင့်သိတဲ့ ပြည်သူတွေနှင့် ပြည်သူ့အချစ်တော် ရော်ဘင်ဟုထ်ရယ် သူ့သမီးလေးရယ်က မင်းသားလေးကို မြို့စားမင်းရဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု လက်ထဲကနေ ဘယ်လိုကယ်တင်ကြမလဲ…. နောက်ပြီး ရော်ဘင်ဟုထ်ရဲ့ သမီးနဲ့ မင်းသားလေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကို ဒီကားထဲမှာ ကြည့်ရှုရမှာပါ……… #Zawgyi ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ပုံျပင္ေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ဒါ႐ိုက္တာ Peter Hewitt ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ Princess of Thieves နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ ဒီဇာတ္ကားက ...
IMDB: 6.2/10 10,948 votes
One2Ka4One2Ka 4(2001) Shahrukh Khan ဖန်တွေ အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်သည်…. အာရွန်နဲ့ဂျာဗစ်ဘိုင်ကတော်တော်လေးရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး နှစ်ယောက်စလုံးကထောက်လှမ်းရေးရဲအရာရှိတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ ဂိုဏ်းကြီး KKV ဆိုတဲ့မှုးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့မှုးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုတစ်ခု ကို အချိန်ကိုက် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကြတယ်… အာရွန်းတို့အဖွဲ့ဟာ အထူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ရဲတွေဖြစ်ပေမဲ့ မူးယစ်အဖွဲ့က အင်အားလည်းများတဲ့အပြင် အတွေ့အကြုံရှိသူတို့ဆိုတော့ အာရွန်းတို့အဖွဲ့ အတော်မလွယ်ကူပါဘူး..ဒီဖမ်းဆီးမှုကို အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားတဲ့နောက်တော့ ပြဿနာမျိုးစုံ အာရွန်းခေါင်းပေါ်ရောက်လာပါတော့တယ်…ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့
IMDB: 5.4/10 4,609 votes
Bubble Boy ပြင်ပက ဝင်လာတဲ့ ရောဂါတွေကို ပြန်တိုက်ထုတ်ဖို့ ကိုယ်ခံအား စနစ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ မွေးကတည်းက ဘာကိုယ်ခံအားမှ ပါမလာတဲ့အတွက် ရောဂါပိုး အသေးလေးဝင်ရင်တောင် သေသွားနိုင်တာမို့ လေပူဖောင်းထဲမှာပဲ အမြဲနေနေရပါတယ်။ လေပူဖောင်းလူသားရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ခွီးနေရအောင် ရိုက်ထားတာပါ။ ကြည့်ချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
IMDB: 5.6/10 29,391 votes
IMDB: 6.2/10 303,268 votes
IMDB: 4.4/10 3,077 votes
Shaolin Soccer ဇာတ္ကားကေဟာင္းေနၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္အခ်ိန္ျပန္ၾကည့္ၾကည့္ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ဇာတ္ကားတစ္ကားပါ…
IMDB: 7.3/10 71,727 votes
The Fast and the Furious ၎ င ၎ ၎
IMDB: 6.8/10 332,907 votes